Achi buutee miila Bakhar Waaree – Walaloo - Ayyaantuu News
Achi buutee miila Bakhar Waaree – Walaloo Binta Dirree iraa | Hagayya 14,2012
Muuznilleen bilchaatee yeroo bahu qabaa
Akkaataan Mallasaa maalif dangaa dhabaa?
Moo isaanumaatu walafaan deebi’ee?
Aangoof bololuudhaan Mallasaa gaaga’ee?
Yoo akkas hin taanee maalif nu dhoysan ree
Maalifi ukkaamsan akka kessa hin barree?
Iccitiin feetellenn mana urtee baatii
Akkamitti dhokatte dubbiin Mallasaatii
Du’aa jiruu isaatiif nuti hin rakkannee
Dubbiidhaatu tahee manama hiikamnee
Isiinuu as deemtii dhokattee waan haftuu
Barumaaf jiraannaa yeroolleen dheerattuu
7 comments - What do you think? Posted by Falmataa - 14/08/2012 at 1:23 am Categories:
7 Responses to “Achi buutee miila Bakhar Waaree – Walaloo”
jira says:	14/08/2012 at 4:05 am	Ajab dubbii! Bareeda dha Binta Dirree jabadhu!
Abbaa Oromiya says:	14/08/2012 at 5:49 am	Galatoomi Binta Dirre.
Wow nama gammachiisa walaloon kee.Jabaadhu itti nuuf fufi.
Otoo keessumattuu waahee nafxanyoota amma hiriira gaafii mirgaa ka obbolewwan kenya kan Muslimtootaa biyya keessa itti jiran dhimma itti bahanii lamuu Oromoo bituuf akkaan tattaafataa jiran irratti nuuf gumaachitee akkaan gaariidha.
Kolbaa says:	14/08/2012 at 6:11 am	Aadde Binta Dirree,
galatoomi giifti kan koo!
Dandeetii kankee gudaa dhaatii, jabaadhu barreessi akkuma obbo Abba Oromiya siin jedha.
Walaloonkee akka damma mi’aaha.
Horii buli !!
tokkuma says:	14/08/2012 at 3:59 pm	akka malee bareedaa jebaadhuu
Kadir says:	14/08/2012 at 9:21 pm	Uuuuuuu garaan dhaba garaachi sagale jitti oromoon kanaafu hattichi du’e jira / baktahee jirra / wa’ee issa dhisaa wa’ee biyya dubbadhudha kessaattu saba koo oromoo oso jiru hin duunu ol haa kaanu kessattu hoggantota keenya rabbi soddadha ummataaf yaada uuuuuuu urrrrih
obsaa says:	14/08/2012 at 9:27 pm	Wallaloo bareeda. Dhokkachuun dhimma Mallasaa namichi jiraattus du’us Woyyaanonni ummata biyyatti hangam akka tuffatan nu hubachiisa.
abba-beekam says:	22/08/2012 at 7:41 am	‘bareeda dhummaa’, jabaadhu adeero. Facaasi abboo, haa- baraanu haa-barsiifnu..